Muva nje, ukudla okunemfashini ukulahlekelwa izikhundla zabo nokunikeza indlela enempilo nangokwengeziwe. Ukudla okunempilo kuyisiqinisekiso sempilo yomzimba wethu, futhi ukuthandwa kokudla "okunempilo" akumukeli nje kuphela abathandi bokulahlekelwa isisindo, kodwa nabaningi bokudla. Namuhla, ngokuphindaphindiwe kuba ukudla okudumile ekunciphiseni isisindo kwinani le-glycemic. Okusemqoka kokudla kwe-glycemic index ukuthi kwandisa izinga lokunciphisa umzimba, okusheshisa ukunciphisa isisindo.
Ososayensi baseHarvard Institute bathola ukuthi ezifweni ezinjenge-ischemic isifo senhliziyo nesifo sikashukela sezinga lesibili, indima enkulu idlalwa yinkomba ye-glycemic.
Inkomba ye-glycemic isetshenziselwa ukuchaza ukufana kwama-carbohydrate emzimbeni. Lokhu kuyinkomba esilinganisa inani leshukela elisegazini, amahora amabili ngemuva kokudla. I-Sugar ilinganiswa ngesilinganiso se-100-point. Ngenxa yalokhu, kungenzeka ukuthola ukuthi yimiphi imikhiqizo enobuthi obuyingozi kakhulu emzimbeni, nokuthi yini ongayisebenzisi ukunciphisa isisindo nokudla okunempilo.
Ukudla okukhulunywa kakhulu namhlanje, ukuthi umuntu kufanele adle ama-carbohydrates engathinti ukunyuka okubukhali ezingeni likashukela ne-insulini egazini. Ngenxa yalokhu kudla, umuntu uvimbela ukutholakala kwezifo (isifo sikashukela, isifo senhliziyo) futhi kunciphisa isisindo.
Imikhiqizo enokuqukethwe okuphansi kwe-glycemic index isuke ihamba kancane kancane kancane emzimbeni, okunganciphisa ukujula okubukhali egazini legazi kulabo abanegciwane lesifo sikashukela, 1, 2 degrees.
Lokhu kudla ukunciphisa isisindo somzimba akukhiyi ukusetshenziswa kwe-carbohydrate ekudleni (odokotela bomphakathi womhlaba baye bafakazelwa ukuthi ukudla kwabantu kufanele kube nama-carbohydrate, ngoba banikeza umzimba ngamandla angu-60%).
Lokhu kudliwa kwakhiwa ekusetshenzisweni kokudla okunomsoco, ngakho umzimba udinga ukudla kancane kakhulu, futhi ukubaluleka kokudla okudliwayo sekude kakhulu.
Lokhu kudla kusho ukunciphisa ekudleni kokudla okunamafutha amaningi.
Kudingeka udle imvelo futhi igcwele, kodwa hhayi imikhiqizo esiphelile futhi eqediwe.
Uma ukudla kuvunyelwe, ukusetshenziswa kwemifino (ngobuningi obulinganiselwe) equkethe isitashi, kanye nezithelo nemifino.
Ubisi olunamafutha aphansi kanye nokudla okunomsoco, imifino, izithelo, izithelo zommbila, inyama yezinhlanzi, inyama enomzimba, nazo zivunyelwe ngokudla.
Ukushintshwa ekudleni ngeke kube nzima. Kwanele ukunciphisa okuqukethwe kwama-carbohydrates ngenani elikhulu le-glycemic. Kunezincomo eziningana eziyisisekelo zokushintshela ekudleni:
Esikhathini sokudla kwasekuseni udinga ukwethula iphalenda - oatmeal, ibhali kanye ne-bran.
Yidla isinkwa kuphela ku-wholemeal, inhlama enomuncu kanye nohlamvu oluphelele.
Nciphisa ukusetshenziswa kwezitsha eziqukethe amazambane.
Yidla izithelo nemifino eminingi.
Yidla isaladi yemifino enomsoco, enamathele nge-Provencal yokugqoka equkethe uviniga.
Ungafaka futhi i-pasta ekudleni.
Khumbula ukuthi ukudla okunjalo ngeke kulimaze umzimba, ngenxa yokusetshenziswa kokudla okuwusizo futhi kucebile amavithamini namaminerali. Lokhu kudla akufaki ukusetshenziswa kwe-carbohydrate futhi kunciphisa ingozi yezifo.
Ungasusa kanjani isisu emva kokubeletha?
I-Varicosity ne-aqua aerobics
Ngameva emzimbeni omncane, noma Indlela yokulahlekelwa isisindo ngo-20 kg
Ungaba kanjani i-plastic ngaphezulu?
Ukudla okunamafutha aphansi
Ubuhlobo obunothando emsebenzini
Ngingaphi lapho nginomntwana, ukuzijabulisa
Isaladi lesipinashi, igromegranate ne-avocado
Okufuthiwe "i-Margarita" ene-strawberries
Isaladi kusuka iklabishi ebomvu: ukudla okunjalo okumnandi kwakungakafiki
Thatha ingane ngaphandle kwebhodlela
Intsha nobuhle bezandla zakho
I-cissus yezitshalo ezihlobisa